သင်ျလိုးဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့တြန္းညမ်းမိသားစု Xxx ဂိမ္း
အပေါ်မယ့်အရာကိုဂိမ်းကစား? ပြီးပြီဆိုရင်လဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကြောင့်စျေးကွက်အတွက်တချို့အသင်ျဂိမ္းကောင်းမြတ်ခြင်း၊လူအပေါင်းတို့သည်အတူတစ်ဦးဆေးထိုး၏တြန္းညမ်းပျော်မွေ့၊ကျွန်မအထင်ကအကြောင်းပြောဖို့လုံခြုံကျနော်တို့ထက်ပို။ သင်ျလိုးဂိမ်းများရှိပါတယ်မြန်ဖြစ်လာအင်တာနက်ရဲ့အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်၊တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးင့်သောချည်နှောင်ထားရန်တစ်ဦးကြီးမားသောအပြုံးမျက်နှာမှာပြချင်တယ်ဆိုရင်သင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ကြီးမြတ်ညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း၊ဒီနေရာအတိအကျကိုပြုမည်။, စဉ်တွေအများကြီး၏အခြားနေရာများထွက်သောကာလ၌အချိန်အားဖြင့်၊ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမယ့်တစ်ငရဲ၏အချိန်အများကြီးကြိုးစားသောသေချာအောင်ကျနော်တို့အဆင်သင့်အနာဂတ်အတွက်! မည်သို့သည်ဤအမှုကိုပြုသော၊အတိအကျ? ကောင်းပြီ၊မယ့်အစားကြိုးစားဖို့အတင်းအကျပ်သို့သင်၏လက်ကိုရယူခြင်းအပေါ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကပူဇော်မဆိုမပါဘဲကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယများ၊သင်ျလိုးဂိမ်းဒီနေရာမှာသင်ပြကြောင်းကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်များအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှရဲ့ဘာကိုအပေါ်အခြားဘက်ခြမ်း။ ကျနော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တြန္း၊ကျနော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မိသားစုသံုးေ–လိုပြောဖို့တခြားအကြောင်းဘာမှမ? ဟုတ်ကဲ့?, ကောင်းပြီ၊ကောင်းစွာ–ကျွန်တော်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်ပြောဆိုကြောင်းနည်းနည်းပိုကိုအထူးလျှင်သင်အမှန်တကယ်သိရန်လိုအပ်!
ပထမဦးဆုံးအရာအားသတိထားမိပြီးသဘောပေါက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းကအကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့သင်ျလိုးဂိမ်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၁၀၀%အခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်။ မှန်တယ်:သင်ပေးချေဖို့မလိုအပ်မည်ဟုအမိန့်အတွက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်! ကျွန်တော်လည်းသေချာကြောင်းအရာအားလုံးကိုဒီမှာကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအရာဖြစ်ပါသည်၊တစ်ဖန်စီလမ်း၏ဟုဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းနိုင်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်။, ဒါဟာတောက်ပသောအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပေါ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ငါရှိသည်ဖို့ပြောခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်ဝေသူ၏အကြောင်းအရာကိုကျနော်တို့၊အထူးသဖြင့်အထူးနှင့်လျောက်ပတ်သောနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီမှာ။ ဒါဟာလည်းဟုဆိုလိုသည်၊အဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအနိုင်ရဖို့အာမခံချက်အရာတစ်ခုခုမယ်မဟုတ်ရင်မရပေါ်အခြားပလက်ဖောင်း။ သူတို့ကလည်းလျစ်လျူရှုသမ္မာတရားကိုသင်တို့အားပြောပြရန်၊သူတို့တွေဟာအမြဲဝေမျှပစ္စည်းနှင့်ဘယ်တော့မှဖြောင့်မတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအချက်ကို! ဒါပေမယ့်ဒီမှာသင်ျလိုးဂိမ်း၊သင်အလောင်းအစားနိုင်အောက်ခြေလႊတ္ေတာ္သောတိရစ္ဆာန်အညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားကျနော်တို့သင်ဆောင်အဖြစ်လတ်ဆတ်သောအဖြစ်အသုံးျ။, ဒါကြောင့်ဖြုန်းကိုရပ်တန့်နှင့်အတူအချိန်သောအရပ်တို့ကိုမမသိဘူးဘယ်လိုပေးချင်သင်သည်အဘယ်သို့:ကျွန်တော်ကယ်လွှတ်ပြီးတော့အချို့!
ဘာရဲ့တော်တော်လေးမင်းအတွက်ကြယ်ကသင်ျလိုးဂိမ်းများကျွန်မတို့ဟာအဲဒါကိုလည်း ၁၀၀%အခမဲ့သင်လက်လှမ်း! မှန်တယ်:သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်ချေပြီးတစ်ပြားရနိုင်ရန်အတွက်သင်၏လက်ကိုအပေါ်အဘယ်သို့၏အတွင်းပိုင်း။ အကြောင်းရင်းကကျနော်တို့ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်ကျနော်တို့စစ်မှန်ကြောင်းစဉ်းစား၏အနာဂတ်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သွားပတ်ပတ်လည်အခြေပေးခြင်းလူအဖို့လက်လှမ်းဘာမပါဘဲသူတို့လိုချင်တဲ့တောင်းဆိုမှုများအတွက်ငွေပြန်လာ။ အများကြီးဒီမှာအသင်းကဝယ်ယူ Cyberpunk ၂၀၇၇ အမှုနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်–ကျနော်တို့အားလုံးသိလည်းကောင်းစွာနည်းနာကျင်ဒါဟာဝယ်ဖို့ဂိမ်းရိုးရှင်းစွာတက်မရှငျပါဘူးမျှော်လင့်ချက်များ။, အကောင်းဆုံးကို၏အကောင်းဆုံးအားလုံးအကြောင်းပါသောအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားဖ်ာ္ေျအခမဲ့နှင့်အကြောင်းတူခံစားချင်ထောက်ပံ့ကြေး–မကြောင်းအရာတစ်ခုခုတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတက်-ရှေ့တွင်ငွေပေးချေမှုမပြုမီသင်အမှန်တကယ်သည်အဘယ်အရာကိုသင်အလိုရှိသော။ သင်ျလိုးဂိမ်းများဘို့အကဒီမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအဝုိင်း၊မေျပာသတိပြုမိသောအရာကို၏စားသုံးသူများအလိုအဘယ်ကြောင့်သူတို့ခံရဖို့တာပေါ့ဒါကြောင့်အရေးအနာဂတ်အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအတွက်အထွေထွေ။ အားလုံးပြီးနောက်၊အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့တွေမတတ်နိုင်သင်ပျော်ရွှင်စေကြောင်းအရာနှင့်အတူ၊သင်လိုချင်ကြောင်းမယ့်ကောင်းကောင်းပါ့မလားသံသယအနာဂတ်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်း၊မှန်သော?, ငါအစကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေလိုကြောင်းကျနော်တို့လုံးဝအနိုင်ရမှပေးဆောင်အင်္ဂါအတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်အရာအားလုံး၏အလိုက်စဥ်–သင်ခံစားနိုင်ရဲ့အရာအားလုံးကိုကဒီမှာထောက်ပံ့ဖို့မလိုဘဲလစာ–ခပ်သိမ်းသောတစ်ခုတည်းအချိန်!
ကိုယ့်အကြောင်းကကျွန်မကို၊မိတ်ဆွေတွေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစည်းကိုအဘို့အဖတ်ပေါ်သင်ျလိုးဂိမ်းများနှင့်အရာအားလုံးကိုပူဇော်ဖို့ရှိသည်။ ငါတကယ်ယုံကြည်ကြဘူးကြောင်းလျှင်သင်မိသားစုတူလိင်ဆက်ဆံနှင့်သင်ဖွင့်ရန်သို့တြန္း၊ဤသည်အကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်အဘို့အဘယျသို့ရရလိုခငျြ။ အဆိုပါခရီးစဉ်သည်ကိုယ့်အကျီ၊ဒါပေမယ့်နိုင်ကတည်းကဖန်တီးအကောင့်တစ်ခုအခမဲ့များအတွက်၊သင်ပါလိမ့်မယ်၊မကြာမီနားလည်သဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတက်အချို့သောအမှန်တကယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်မျှော်လင့်ချက်များလိမ့်မည်ဟုသံသယမရှိရချင်မှဝင်ရောက်ခွနောက်ကျတာထက်။ ကျေးဇူးအများကြီးမှတ်မိ:လိုးဂိမ္းအားပေးမည်ဟုကဒီမှာသင်၏အကောင်းဆုံးအပူထဲမှာလိုးဂိမ္းချမ်းသာ!, သင့်ရဲ့ကြက်အဆင်သင့်နှင့်မကြောက်ပါဘူးရှုပ်သောအရာသည်အထိကျရောက်။